China SSQ-125-9A / B Oge Ichekwa Granite Diamond Hụrụ Agụba emeputa na suppliers | Ngwaọrụ Shuangshi
SSQ-125-9A / B Oge Ichekwa Granite Diamond Hụrụ Agụba
Soplaya / wholesaler / wholesaler nke 5 of (125 mm) diamond ịcha pupụtara / okirikiri hụrụ pupụtara maka mgbidi uzo / konkiri
Net arọ (g) 126g
Ezigbo Elu 12mm
Agụba dayameta 5 "(125mm)
5 "(125mm) diamond hụrụ mma ka ọ na-ahapụ obere chipping ka ọ na-enye ngwa ngwa, mkpụmkpụ dị ọcha. Ọ bụ mgbakwunye nke oghere quad na-eme ka mma a dị mma karịa.
Iji agụba na-aga n'ihu na iwepụ ma ọ bụ nkwụnye quad na-enye gị ohere ịmecha ma banye ohere dị ka sink sink. Chepụta nkekọ nkekọ dị ka isi ike nkume gị dị iche iche, abrasiveness, igwe, oke iji weta ọnwụ na oke arụmọrụ.
Nkà na ụzụ nke usoro ngwaahịa zuru oke, njikwa usoro ahụ siri ike, ọnụahịa ngwaahịa dị elu, ụdị ngwaahịa ahụ zuru. Diamond hụrụ agụba nke ịcha ike na kenkuwa na-abụghị dara ihe nwere a elu aha na njem.
Companylọ ọrụ ahụ etinye ego buru ibu iji zụta ngwa ngwa dị oke mkpa na ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ahụ, ma goro ndị ọkachamara n'ọhịa nke teknụzụ ọla kọpa na teknụzụ ndị ọkachamara na teknụzụ nke ngwa ọrụ diamond iji mee nkwado teknụzụ. Companylọ ọrụ ahụ ejirila nkà na ụzụ ọhụrụ mee ihe iji nye ndị na-emepụta ihe eji emepụta obodo na ike ọkụ. Rụ ụlọ eji achọ okwute, ịkpụ okwute na ubi ndị ọzọ na-arụ ọrụ iji nye ndị ọrụ nkọ nkọ karị, na-adịgide adịgide ma na-echekwa oge.
Anyị factory si atụmatụ lekwasịrị na-eke zuru àgwà uru na-eju afọ ahịa 'ina. Ihe omuma anyi nile bu ihe omuma nke ndi ahia. Naanị nzute ihe ndị ahịa chọrọ nwere ike ime ka anyị tolite na ịrụ ọrụ mgbe niile. Ya mere, anyị na-enye ọrụ a na-ere ere: Injinia ọkachamara na ntinye ndu ntinye.
1.The hụrụ agụba nwere ezi sharpness na elu arụmọrụ na usoro nke ịcha;
2.The hụrụ agụba nwere ike zuru okè elu-arụ ọrụ arụmọrụ enweghị mgbawa ma ọ bụ na-agbasa slates mgbe ịcha.
3. saferụ ọrụ nchekwa, dị jụụ, ma doo anya, na-ebelata oge igbubi na oge ọrụ
4. Great ime mgbanwe & No chipping
Nke gara aga: SSQ-114-66A Extended Life Circular Saw Blades maka Nkume
Osote: SSQ-130-9A / B / C High Performance Diamond Hụrụ Agụba maka Wall uzo
SSS-156-12A / B / C Diamond Hụrụ Agụba tingcha Disc ...
SSS-130-9A / B Ogologo Ndụ Life Diamond Hụrụ Blad ...
SSQ-114-8HA / B / C Sharper Ọsọ ọsọ Hụrụ Agụba maka S ...
SSQ-156-12HA High nkenke Granite Stone Cutti ...